Sina tokana tokana famaranana mitroka sentrifugal karazana NFPA FM paompy mpamokatra afo sy mpanamboatra | Tongke
Paompy fanamafisam-peo karazana sentrifugal karazana NFPA FM paompy tokana
Ny paompy sentrifugal suction farany dia mahazo ny anarany avy amin'ny làlana nalehan'ny rano hiditra ao anaty paompy. Matetika ny rano dia miditra amin'ny lafiny iray amin'ny impeller, ary amin'ny paompy mitsivalana farany, dia toa miditra amin'ny "faran'ny" paompy io. Tsy toy ny karazana casing Split ny fantsom-panafody sy motera na motera dia mitovy daholo, manala ny ahiahy momba ny fihodinan'ny paompy na ny orientation ao amin'ny efitrano mekanika. Satria miditra amin'ny lafiny iray amin'ny impeller ny rano, very ny fahafahanao manana bearings amin'ny lafiny roa amin'ny impeller ianao. Ny fanohanana mitondra dia avy amin'ny motera ihany, na avy amin'ny paositry ny paompy. Manakana ny fampiasana an'io karazana paompy io amin'ny fampiharana rano mikoriana be.
Fiarovana amin'ny kalitao
mpitovo sehatra Paompy Advantages:
● Mitambatra mivantana, porofo hovitrovitra ary tabataba ambany.
● Mitovy savaivony ny fidirana sy ny fivoahana.
● C&U mitondra, izay no marika malaza indrindra any Shina.
● Ny fihenan-tsofina mikoriana dia miantoka ny fiainana lava maharitra.
● Fototra kely takiana izay hamonjy ny fampiasam-bola amin'ny fananganana 40-60%.
● tombo-kase tena tsara izay tsy misy famoahana
♦ Rafitra matevina, fampiharana indrindra amin'ny fananganana maoderina.
♦ Paompy paompy: ny casing spiral misy fifandraisana misy fantsona dia noforonina sy novokarin'ny faran'izay ambony amin'ny maodely draulic ankehitriny, miaraka amin'ny fidirana sy ny fivoahana mitovy savaivony. Ny flanges dia mifanaraka amin'ny GB4216.5, ary ampiarahina amin'ny plug-n'ny tsindry Rp1 / 4 na Rp 3/8.
♦ Impeller: impeller mihidy, tsy misy fetran'ny fitarihana fihodinana eo ambanin'ny mari-pana rano ambanin'ny 80 ° C sy 120 ° C.
♦ Famolavolana manokana ny peratra fanombohana dinika dia miantoka ny tombo-kase sy fiasa azo antoka.
The UnongkE Pump Fire Pump Units, Rafitra, sy rafitra voaangona
Ny fametrahana TONGKE Fire Pump (ankatoavin'ny UL, Araho ny NFPA 20 sy CCCF) dia manome fiarovana avo lenta amin'ny fitaovana manerantany. TONGKE Pump dia nanolotra serivisy feno, manomboka amin'ny fanampiana injeniera ka hatramin'ny fanamboarana trano hatramin'ny fanombohana. Ny vokatra dia namboarina avy amina safidy paompy, kapila, fifehezana, takelaka fototra ary kojakoja. Ny safidin'ny paompy dia misy paompy afovoany mitsivalana, an-tsipika ary faran'ny savoka afovoany ary koa paompy turbine mitsangana.
Ny maodely marindrano sy mitsangana dia manome fahaiza-manao hatramin'ny 5.000 gpm. Ny maodely fitrohana farany dia manome 2.000 gpm. Ireo singa an-tsipika dia afaka mamokatra 1.500 gpm. Ny lohany dia manomboka amin'ny 100 ft ka hatramin'ny 1.600 ft miaraka amin'ny 500 metatra. Ny paompy dia mandeha amin'ny motera elektrika, motera diesel na turbine etona. Paompy afo mahazatra dia vy vy miaraka amina fittings varahina. TONGKE no manome ny fittings sy kojakoja natolotry ny NFPA 20.
Ny fangatahana dia miovaova arakaraka ny maotera kely sy mandeha amin'ny herinaratra mandeha amin'ny motera diesel, rafitra fonosana. Ny singa mahazatra dia natao hitantanana rano madio, fa misy fitaovana manokana azo ampiasaina amin'ny rano ranomasina sy fampiharana ranoka manokana.
Ireo paompy afo TONGKE dia manome fampisehoana ambony amin'ny fampiharana Fambolena, Indostrialy ankapobeny, Varotra varotra, Indostria herinaratra, Fiarovana amin'ny afo, Kaominaly ary fanodinana.
Fiarovana amin'ny afo
Nanapa-kevitra ny hampihena ny lozam-pifamoivoizana amin'ny tranonao ianao amin'ny alàlan'ny fametrahana rafitra paompy afo UL, ULC. Ny fanapaha-kevitrao manaraka dia ny rafitra hividy.
Ianao dia mila paompy afo izay voaporofo amin'ny fametrahana erak'izao tontolo izao. Novokarin'ny matihanina manana traikefa lehibe amin'ny sehatry ny fiarovana afo. Mila serivisy feno ianao raha manomboka. Mila paompy TONGKE ianao.
Manome vahaolana momba ny paompy TONGKE afaka manatanteraka ny Requirements:
● Fepetra fanamboarana trano feno
● Ny fahaizan'ny fitsapana mihodina amin'ny mekanika miaraka amin'ny fitaovana nomen'ny mpanjifa ho an'ny fenitra NFPA rehetra
● Modely marindrano ho an'ny herinaratra hatramin'ny 2.500 gpm
● Modely mitsangana ho an'ny 5.000 gpm
● Modely an-tsipika mahomby hatramin'ny 1.500 gpm
● Atsaharo ny maodely suction ho an'ny 1,500 gpm
● Drives: motera elektrika na motera diesel
● Fitaovana fototra sy rafitra fonosana.
Unitsim-paompy sy rafitra voaangona
Ny paompy elektrika Electric Drive sy ny Diesel Engine Drive dia azo omena amin'ny alàlan'ny paompy, kapila, fanaraha-maso ary kojakoja ho an'ny fangatahana serivisy afo voatanisa sy nekena ary tsy NON List. Ireo singa sy rafitra fonosana dia mampihena ny vidin'ny fametrahana paompy afo ary manolora ireo.
Electric Motor Drive Paompy afo tokana
Diesel Engine Drive Dingana tokana paompy afo
Q. Inona no mampiavaka ny paompy afo amin'ny karazana paompy hafa?
A. Voalohany, mahafeno ny fepetra henjana ao amin'ny NFPA Pamphlet 20, Underwriters Laboratories ary Factory Mutual Research Corporation izy ireo amin'ny fahamendrehana sy ny serivisy tsy azo ihodivirana ao anatin'ny toe-javatra sarotra sy sarotra indrindra. Ity zava-misy ity dia tokony hiresaka tsara amin'ny kalitaon'ny vokatra TKFLO sy ny endrika famolavolana premium. Ny paompy afo dia takiana mba hamokarana tahan'ny mikoriana manokana (GPM) sy ny fanerena 40 PSI na mihoatra. Ankoatr'izay, ireo masoivoho voalaza etsy ambony dia manoro hevitra fa ny paompy dia tokony hamokatra farafaharatsiny 65% ​​amin'izany tsindry izany amin'ny 150% amin'ny fikajiana naoty - ary mandritra ny 15 metatra ny fisondrotana. Ny fiolahana fampisehoana dia tsy maintsy atao ka ny loha mihidy, na "churn" dia avy amin'ny 101% ka hatramin'ny 140% ny lohany naoty, miankina amin'ny famaritan'ny masoivoho ny teny. Ny paompy afo an'ny TKFLO dia tsy atolotra ho an'ny serivisy paompy raha tsy mahafeno ny fepetra takian'ny maso ivoho.
Ankoatra ny toetra mampiavaka ny zava-bita, ny paompy mpamono afo TKFLO dia voadinika tsara avy amin'ny NFPA sy FM ho an'ny fahamendrehana sy ny fiainana lava amin'ny alàlan'ny famakafakana ny endriny sy ny fananganana azy. Ny fahamendrehana manenjika, ohatra, dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fitsapana hydrostatic intelo heny noho ny tsindry be loatra azo atao raha tsy mipoaka! Ny volavolan'i TKFLO mifono sy maotera tsara dia mamela antsika hanome fahafaham-po an'ity famaritana ity amin'ny maro amin'ireo maodelintsika 410 sy 420. Ny kajikajian'ny injeniera momba ny fiainana, ny fihenan'ny bolt, ny fihenan'ny zana-ketsa ary ny fihenjanana herinaratra dia tsy maintsy apetraka amin'ny NFPA ihany koa. ary ny FM ary tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny fetra mpandala ny nentin-drazana mba hahazoana antoka fa azo itokisana tanteraka. Ary farany, rehefa vita ny fepetra takiana mialoha, ny paompy dia vonona amin'ny fanandramana fanamarinana farany ho hitan'ny solontena avy amin'ny fitsapana UL sy FM Performance izay mitaky diametran'ny impeller maromaro haseho an-tsitrapo, ao anatin'izany ny farafaharatsiny sy ny ambony indrindra ary maro ao eo.
Q. Inona ny fotoana itarihana mahazatra an'ny paompy mpamono afo?
A. Ny fotoana mitarika mahazatra dia mihazakazaka 5-8 herinandro aorian'ny famoahana baiko. Antsoy izahay raha mila antsipiriany.
Q. Inona no fomba mora indrindra hamaritana ny fihodinan'ny paompy?
A. Ho an'ny paompy misy kitapo mitsivalana marindrano, raha mipetraka eo ambonin'ny motera manatrika ny paompy ianao, dia avy eo amin'io toerana io no misy ny paompy an-kavanana, na avy amin'ny famantaranandro, raha avy amin'ny ankavanana sy ny fivoahana ny suction. dia miankavia. Ny mifanohitra amin'izany dia marina amin'ny fihodinana havia, na amin'ny fihodinana mifanohitra amin'ny famantaranandro. Ny lakileny dia ny teboka fahitana rehefa miresaka ity lohahevitra ity. Hamarino tsara fa ny lafiny roa dia mijery ny casing pump amin'ny lafiny iray.
Q. Ahoana ny haben'ny motera sy motera amin'ny paompy afo?
A. Motors sy motera omena paompy afo TKFLO dia refesina araky ny UL, FM sy NFPA 20 (2013), ary natao hiasa amin'ny toerana rehetra amin'ny fiolahana paompy tsy misy fihoarana ny haben'ny serivisy na ny motera. Aza mety hofitahina ianao fa ny maotera dia mahatratra 150% fotsiny ny fahaizan'ny nameplate. Tsy dia fahita firy ny paompy mirehitra miasa mihoatra ny 150% amin'ny fahaizan'ny isa (ohatra, raha misy hydrant misokatra na fantsom-paty tapaka any andrefana).
Raha mila tsipiriany bebe kokoa, azafady mba jereo ny NFPA 20 (2013) andiany 4.7.6, UL-448 andiany 24.8, ary ny fenitra fankatoavana ny Factory Mutual ho an'ny paompy mpamono afo, Kilasy 1311, fehintsoratra 4.1.2. Ny motera sy motera rehetra misy paompy afo TKFLO dia mitovy amin'ny tena tanjon'ny NFPA 20, UL, ary Factory Mutual.
Satria ny maotera paompy mpamono afo dia tsy antenaina hihazakazaka hatrany, matetika dia refesina izy ireo hanararaotra motera fanompoana 1.15. Ka tsy toy ny rano ao an-toerana na ny paikadin'ny paompy HVAC, ny maotera paompy afo dia matetika tsy "be loatra" tsy mihoatra ny haben'ny fiolahana. Raha mbola tsy mihoatra ny motera serivisy 1.15 ianao dia avela. Ny maningana an'io dia rehefa ampiasaina ny motera elektrika miovaova hafainganam-pandeha miovaova.
Q. Azoko atao ve ny mampiasa fantsona metatra mikoriana ho soloina lohan-doha?
A. Ny fantsom-pandrefesana dia matetika azo ampiharina izay manelingelina ny rano be loatra amin'ny alàlan'ny nozzles UL Playpipe mahazatra; na izany aza, rehefa mampiasa fantsona metatra mikoriana mikatona manodidina ny paompy afo ianao dia mety manandramana ny fahombiazan'ny paompy, saingy TSY manandrana ny famatsian-drano ianao, izay singa iray lehibe amin'ny rafitra paompy afo. Raha misy ny sakantsakana amin'ny famatsian-drano dia tsy ho hita izany amin'ny tadin'ny metatra mikoriana, fa azo antoka fa haseho amin'ny alàlan'ny fanandramana paompy misy hosotra sy Playpipe. Amin'ny fanombohana voalohany ny rafitra paompy afo, dia manizingizina foana izahay ny hikoriana ny rano amin'ny alàlan'ny rafitra mba hiantohana ny fahamendrehan'ny rafitra iray manontolo.
Raha averina any amin'ny famatsian-drano ny tadin'ny metatra mikoriana - toy ny fitoeran-drano ambonin'ny tany - dia azonao atao ny mitsapa ny paompy sy ny famatsian-drano amin'ny alàlan'io fandaminana io. Hamarino fotsiny fa voadinika tsara ny metatra mikoriananao.
Q. Mila miahiahy momba ny NPSH amin'ny fampiharana paompy ve aho?
A. Mahalana. Ny NPSH (lohan-tsofina miabo tsara) dia fiheverana lehibe amin'ny fampiharana indostrialy, toy ny boiler feed na paompin-drano mafana. Amin'ny paompy afo kosa dia miatrika rano mangatsiaka ianao, izay mampiasa tsindry avy amin'ny atmosfera rehetra hanararaotra anao. Ny paompy mpamono afo dia mila «suction safo-drano», izay ahatongavan'ilay rano any amin'ny mpanentana paompy amin'ny alàlan'ny hery misintona. Mila izany ianao hiantohana ny paompy 100% amin'ny fotoana, ka rehefa may ianao dia mandeha ny paompinao! Azo atao tokoa ny mametraka paompy misy valizy amin'ny tongotra na fitaovana artifisialy amin'ny priming, saingy tsy misy fomba azo antoka ny 100% fa hiasa tsara ny paompy rehefa antsoina izy hiasa. Amin'ny paompy mitsivalana indroa misy tranga roa, dia tsy misy afa-tsy 3% ny rivotra ao anaty kaontenera paompy hahafahana mamindra ilay paompy. Noho izany antony izany dia tsy hahita mpamokatra paompy vonona hanao vivery ny varotra paompin-tsolika ianao ho an'ny fametrahana rehetra izay tsy manome antoka ny "fitrohana safo-drano" amin'ny paompy afo amin'ny fotoana rehetra.
Q. Rahoviana ianao no hamaly fanontaniana bebe kokoa amin'ity pejy FAQ ity?
A. Ho ampianay izy ireo rehefa misy ny olana, saingy aza misalasala mifandray aminay amin'ny fanontanianao!
Previous: TWP andian-dahatsoratra finday Dysel Engine Drive Vacuum Priming tsara manondro paompy dewatering
Manaraka: Split casing double suction type NFPA UL FM paompy afo
Famaritana paompin-tsolika mitsinontsinona TKFLO
Karazana paompy Farano ny paompy sentrifugal suction amin'ny alàlan'ny mety amin'ny fanomezana rano ho an'ny rafitra fiarovana amin'ny afo amin'ny tranobe, zavamaniry ary tokontany.
fahafahana Hatramin'ny 2500GPM (567m3 / ora)
lohany Hatramin'ny 340feet (104meters)
tsindry Hatramin'ny 147 Psi (10 kg / cm2, 1014 KPa)
Herin'ny trano Hatramin'ny 350HP (260KW)
Drivers Motera elektrika mitsivalana sy motera diesel
hafanana Ambient ao anatin'ny fetra azo iasana amin'ny fampandehanana fitaovana mahafa-po.
Fitaovana fanamboarana Cast iron, Bronze nitafy
haben'ny famatsiana: paompy mpamily motera maotera + tontonana fanaraha-maso + paompy Jockey Paompy elektrika elektrika + tontonana fanaraha-maso + paompy Jockey
Ny fangatahana hafa ho an'ny tarika dia miangavy anao hiaraka amin'ireo injenieran'ny TKFLO.
Multistage Fire Pump Stainless Steel Material ...
Diesel Engine Long Shaft Vertical Turbine Fire ...
Paompy afovoan'ny centrifugal fanerena avo lenta
Misaraka casing indroa karazana suction NFPA UL FM fir ...